जिरो विश्वास भएका ओलीको प्रस्ताव छलछामपूर्ण : रामकुमारी झाँक्री
एमाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहकी प्रभावशाली नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव छलछामपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
कांग्रेस वैधताको चिन्ता, वरिष्ठ नेता पौडेल भन्छन्- अब देउवासँग महाधिवेशन सार्ने बहाना छैन
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘यसअघि देउवाले विभिन्न बहाना गर्दै महाधिवेशन सार्दै आए पनि अब उहाँसँग कुनै बहाना बाँकी छैन।’
'जुनियर' उपप्रधानमन्त्री बन्दा महामारीबीच मन्त्रालय छोड्न बाध्य भएँ : हृदयेश त्रिपाठी
यो अवस्थामा म भाग्न खोजेको पनि होइन। छोड्न खोजेको पनि होइन। महामारीको बीचमा छोड्नु एकदम अपराधपूर्ण नै हो। तर, प्रश्न कहाँनिर आयो भने म भन्दा धेरै जुनियरहरू उपप्रधानमन्त्री बन्दा मैले पदमा बसिरहनु उचित ठानिन।
डुब्नै लाग्यो देश मेरो उठाइदेऊ न कोही
‘ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै ममा यी मान्छेमा प्रगतिशील सोच छैन, गणतन्त्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिप्रति सहिष्ण छैनन् भनेर चस्का पसेको थियो। उनको भूमिका निरंकुश र प्रतिगमन उन्मुख देखिन्छ।’
‘घाँटी थिचेपछि नर्सहरू भागेर शाैचालयमा लुके, ढोका फोडेरै आक्रमण गरेपछि हाम फालेर जोगिए’
'एक समूह ढोका तोडफोड गर्दै भित्र पस्यो। नर्सहरूको घाँटी समातेर आक्रमण गर्न थाल्यो। उनीहरूको पन्जाबाट फुत्किए नर्सहरू ट्वाइलेटमा लुक्न गए। ट्वाइलेटको ढोकासमेत फोडेर उनीहरू भित्र गए। ज्यान जोगाउन चार जना नर्सले दुई तल्लामाथिबाट हाम फाले।'
सुरुमा नरुचाइएका जागेश्वर प्रिय बन्दै 'नियमित काेराेना अपडेट' बाट बिदा
गौतमको स्वर सुन्नेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना अपडेट कार्यक्रम सुरु भएकाे सबैले चाल पाउँथे। संक्रमित कति थपिए, कति मुक्त भए र कतिको ज्यान गयो? सरकारी लेखाजोखाको आधिकारिक सूचनादाता थिए उनी।
किन बारम्बार गइरहेको छ भूकम्प?
त्रिचन्द्र क्याम्पसका भूगर्भ विभाग प्रमुख अनन्त गजुरेल यसलाई ०७२ कै परकम्प भएको बताउँछन्। 'परकम्प यति वर्षसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन। ठूलो भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म परकम्प गइरहन्छन्', उनले भने। उनी बिस्तारै परकम्पको संख्या घट्दै जाने बताउँछन्।
निजी अस्पतालमा उपचार र अक्सिजन छैन, के छ सरकारी तयारी?
निजीमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। सरकारी अस्पतालका चिकित्सक पनि मारमा परेका छन्। सरकारी अधिकारी भने यस्तो अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुने बताउँछन्।
अस्पताल जाँदा बेड पाइन्न, स्वास्थ्य प्रवक्ता भन्छन्– हावा कुरा गर्ने!
सोमबार बिहान ७ बजे मैतीदेवीका नरेन्द्र चन्दले फोनमा अननुय गरे। यसबारे टेकु अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलासँग बुझ्दा आफूले बिरामीलाई कुर्सीमा राखेर उपचारमा गरिरहेको बताए।
महामारीका बेला केएमसी र ह्याम्सको कमाउ धन्दा
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि एउटा बेडको दैनिक ३० हजार शुल्क तोकिएको सूचना निकालेको छ। यस्तै ह्याम्स अस्पतालले एउटा बेडकाे दैनिक ५० हजार रपैयाँ असुल्दै आएकाे छ।
सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण गर्दा एकदमै धेरै संक्रमित देखिन थालेका छन्। उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ।
‘कोरोनाले आक्रान्त बनाउँदा सरकार पन्छियाे’
‘प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका कमजोरी औंल्याउने हो। तर त्यस्तो देखिएन। महामारीमा प्रतिपक्षले विरोध मात्रै गरिदिएको भए सरकारलाई गम्भीर बन्न दबाब पुग्थ्यो।’
समाजसेवी कल्पना, जाे पीडितको न्वारानदेखि मृत्यु संस्कारसम्म आफैं गर्छिन्
कल्पना भट्ट यस्ती समाजसेवी हुन्– उनले न आफ्नो ‘करियर’ को ख्याल गरिन् न त विवाहको। उनी भन्छिन्, ‘समाज सेवामा जुट्दा प्राप्त हुने खुसीले जीवनका सबै भौतिक आनन्द फिका बनाइदिँदो रहेछ।’
कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्यो बाँके, अस्पतालका सबै बेड भरिए, अवस्था नियन्त्रण बाहिर
भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका १ सय ४० बेड सबै भरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. संकेत रिसालले बताए।
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो, कति दिने आवेदन?
राज्यले बिर्सियो भन्दै चित्त दुखाइरहेको सहिद अरविन्द परिवार
प्रेम विवाह गरेका दम्पतीमाथि भारतमा गोली प्रहार, श्रीमान‍्को मृत्यु, श्रीमती घाइते
यी हुन् पदमुक्त जनप्रतिनिधि, जो माओवादी छाडेर एमाले बनेका थिए